Si fudud ugu maamul kiradaada dhaadheer Muddooyinka Dheeraadka ah
Features » Dheeraad Dheer
U adeegso astaantan gaarka ah si aad u maamusho kiradaada habeennimo, toddobaadle, iyo bille ah dhammaantood hal marin soo gal.
Kireysiga muddada-gaaban wuxuu noqon karaa lacag-qaatayaal aad u badan, laakiin isla markaa, haddii aad ku guul darreysato inaad si sax ah u maareyso halista, waxaad ku dambeyn kartaa dabacsanaanta tirooyinka waaweyn. Shirkadaha waaweyn ee guryaha kirada ee leh heshiisyo kireysi go'an ama moodallo kireysi oo kireysi ah ayaa muddo dheer adeegsanayay taatikada kala qeybinta halista u dhaxeysa kirooyinka muddada-gaaban iyo joogitaanka dheer. Tani waxay gacan ka geysaneysaa la dagaallanka khasaarada bilaha daciifka ah ee suuqyada xilliyada.
Cawaaqib xumada cudurka faafa ee COVID-19, tiro sii kordheysa oo ka shaqeeya hoteelada ayaa ku qasbanaaday inay bilaabaan qaadashada jaale dheeri ah. In kasta oo dhinacyo badan oo kirada ahi ay isku mid yihiin, qaar baa ku kala duwan, oo badankood PMSes iyo Channel Maareeyayaasha ku guuldareysto inaad fuliso shuruudahan.
Sidee ayuu Zeevou u dheereystay u caawin karaa?
Sidii Zeevou ay ugu bilaabatay PMS ahaan, Maareeyaha Kanaalka iyo Mashiinka Boos celinta bixiye shirkadaha waaweyn ee kirada fasaxa iyo adeeg bixiyeyaasha guryaha, waxaan u adeegsan jirnay oo kaliya ballansashada habeenki. Si kastaba ha noqotee, aafada iyo codsiyada ka imanaya tiro ka mid ah macaamiisha heer shirkadeed, waxaan go'aansanay inaan ka shaqeyno sidoo kale la-qabsashada kirada muddada-dhexe iyo muddada-dheer.
Astaamaha Joogitaanka Dheeriga ah ee Zeevou wuxuu u oggolaanayaa martida inay dejiyaan qiimaha toddobaadlaha iyo billaha ah, waxayna hubiyaan in qaansheegadka bil kasta ee joogitaannada la dheereeyay aysan ku kala duwaneyn bil ka bil. Nooc isku mid ah ayaa yeelan kara qorshooyin sicir badan oo is barbar socda, marka sicir ka duwan ayaa loo qaadan karaa joogitaan habeenle ah oo ah joogitaan bille ah isla liistadaas. Tani waxay u oggolaanaysaa maareeyayaasha guryaha fasaxa inay yareeyaan halista guryaha madhan iyagoo isku daraya muddada gaaban, muddada dhexe, iyo kirooyinka muddada-dheer, iyadoo lagu saleynayo xaaladaha suuqa ee had iyo jeer is beddelaya.